Ihe ohuru nke PeerTube 2.1 di njikere na interface di nma na nhọrọ | Site na Linux
Depụta ụdị ọhụrụ nke PeerTube 2.1 na interface na nhọrọ dị mma
A mara ọkwa na mbipụta ọhụrụ nke PeerTube 2.1, kedu nke ị bụa decentralized ikpo okwu maka nzukọ, mba na mgbasa nke videos. PeerTube awade nnwere onwe ozo site na onye na-eweta ya na YouTube, Dailymotion na Vimeo, na-eji netwọk nkesa ọdịnaya dabere na P2P ma na-ejikọ ihe nchọgharị ndị ọbịa. Ihe mmepe nke oru ngo a na-ekesa n’okpuru ikikere AGPLv3.
PeerTube dabere na ojiji nke BitTorrent WebTorrent Client, que na-agba ọsọ na ihe nchọgharị ma jiri teknụzụ WebRTC iji guzobe ọwa P2P - nkwukọrịta dị n'etiti ihe nchọgharị na protocol ActivityPub, na-enye ohere ka sava ndị na-adịghị mma sonye na vidiyo na netwọkụ jikọtara ọnụ ebe ndị ọbịa na-etinye aka na ntinye ọdịnaya ma nwee ikike ịdenye aha na ọwa ma nata ọkwa nke ọhụụ vidiyo
E guzobere netwọk federated nke PeerTube dị ka obodo nke obere sava video nnabata njikọ, onye ọ bụla n’ime ha nwere onye nchịkwa nke ya na iwu nke ya nwere ike ịnabata.
Sava ọ bụla nwere vidiyo na-arụ ọrụ nke BitTorrent-tracker, nwere njirimara onye ọrụ nke ihe nkesa a na vidiyo ya.
Na mgbakwunye na ikesa okporo ụzọ n'etiti ndị ọrụ na-ekiri vidiyo, PeerTube na-enyekwa ohere saịtị nke ndị edemede dere maka ntinye vidiyo mbụ iji chekwaa vidiyo ndị ọzọ, na -emepụta netwọk ekesara ọ bụghị naanị site n'aka ndị ahịa, kamakwa site na sava, na mgbakwunye na inye mmejọ mmejọ.
Iji malite nkwanye site na PeerTube, onye ọrụ chọrọ naanị bulite otu vidiyo, nkọwa na mkpado setịpụrụ na otu n'ime sava ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-enweta vidiyo ahụ na netwọkụ federated niile na ọ bụghị naanị site na isi ihe nkesa na-ebudata. Iji rụ ọrụ na PeerTube ma sonye na nkesa ọdịnaya, ihe nchọgharị nkịtị zuru ezu ma ọ nweghị ntinye mgbakwunye sọftụwia ọzọ achọrọ.
Main ọhụrụ atụmatụ nke PeerTube 2.1
Na ụdị ọhụrụ a nke PeerTube 2.1 Echere na ịchọrọ ndị ọrụ iji melite interface ahụ, Na nke animation mmetụta kwukwara mgbe ịmalite na ịkwụsị video playback, ma e wezụga na akara ngosi na bọtịnụ ka emezigharị na ibe nlele vidiyo.
Maka ndị ọrụ ikike, mgbe ha na-atụgharị vidiyo thumbnail, akara ngosi nwere klọọkụ ugbu a na-egosi itinye vidiyo na Ndepụta Nche.
Emegharịala 'Ihe' na ihe ngosi oru ngo, na-enye ohere ngwa ngwa na akwụkwọ ndị ọzọ. Enweela nkwado ederede nke ọma na ọtụtụ usoro nduzi ọhụụ ka akwadoro maka ịhazi na nyocha nsogbu.
E mekwara nhọrọ maka ịza vidiyo vidiyo, dị ka a ọhụrụ comment imewe na-chọrọ nke mbụ kwuru na Ibọrọ ha doro anya iche.
Emebere nlere anya maka avata na usernames ndị ọzọ enwere ike ịgụ. E nyere ọrụ nke azịza nke onye edemede nke vidiyo na mkparịta ụka na-egosipụta ma tinye usoro ngosipụta abụọ, nyere iwu site na oge ezipụrụ ozi na ọnụ ọgụgụ azịza.
Ugbu a ka m matarae ị nwere ike iji akara akara na ederede ma gbakwunye nhọrọ iji zoo ozi site na otu onye so ma ọ bụ saịtị.
Mgbanwe ndị ọzọ pụtara ìhè bụ nhọrọ ọhụrụ maka "vidiyo maka ojiji n'ime" na ọnọdụ nzuzo, nke na-enye ohere ibipụta vidiyo naanị maka ndị ọrụ ejikọtara na sava dị ugbu a, ebe ebupuru vidiyo ahụ na mbụ. Enwere ike iji ọnọdụ akọwapụtara iji hazie ịnweta vidiyo nzuzo maka ụfọdụ ndị ọrụ, dị ka ndị enyi, ezinụlọ, ma ọ bụ ndị ọrụ.
Emejuputara ọgbọ hyperlink na-akpaghị aka na oge ụfọdụ na vidiyo mgbe ekwuru oge (mm: ss oh: mm: ss) na nkọwa ma ọ bụ nkọwa.
Agbakwunyere ike iji nyefee HLS (HTTP Live Streaming) iyi vidiyo site na iji edemede-transcoding-job script. Karịsịa, ọ ga-ekwe omume iwepu WebTorrent ma jiri naanị HLS.
Agbakwunyere nkwado maka vidiyo na usoro m4v.
A tọhapụrụ akụrụngwa iji tụgharịa asụsụ interface ahụ gaa n'asụsụ dị iche iche site na iji ọrụ Weblate.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Depụta ụdị ọhụrụ nke PeerTube 2.1 na interface na nhọrọ dị mma
Depụta ụdị nkwụsi ike izizi nke Trident OS dabere na Void Linux